Sandals - angamba ny karazana kiraro fahiny. Anisan'ireo mponina fahiny tao Babylona, ​​Gresy, ny Fanjakana Romanina, Inde, Ejipta. Avy eo izy ireo dia natao tamin'ireo fitaovana navaravarina tao amin'ilay faritra, ohatra, papyrus, hazo, tsapa, lamba na mololo. Ny olona tsirairay dia samy manana ny kolontsainy manokana avy amin'izy ireo. Ny mahazatra indrindra dia ny kapa hoditra foana.
Ny fanonganam-panjakana tena izy, ny sandalista nandritra ny roampolo taona lasa. Mijanona ela be ao amin'ny alokaloky ny lamaody ambony, dia izy ireo no nosokafana voalohany tamin'ny fomba rehetra, nampiarahina tamin'ny volony ary nanomboka nampiasaina tsy dia tsara loatra, fa koa toy ny kiraro lamaody.
Sandam-be Summer - karazana
Ny sandals dia tsy mitovy karazana. Noho izany, amin'ny karazana halatra sy sols no manavaka:
kapa amin'ny vatosoa ;
kapa amin'ny savily matevina;
kapa eo amin'ny sehatra;
Araka ny dikan-teny amin'ny ampahany ambony, ankoatra ny sata mifehy ny sandale amin'ny lohataona dia toy izany koa:
Ny gladiatera ny sandals. Mora ara-bakiteny io fako io amin'ny vanim-potoana lamaody, manjary mandroso amin'ny vanim-potoana, ary haingana dia haingana. Na dia hatramin'ny 2006 aza, dia maro ireo karazana sandam-bato Romanina no nitazona mafy ny toerany. Inona ity kiraro ity? Ireo dia kapa avo, ny halavany dia afaka miditra amin'ny lohalika. Mora ny mitafy sy mampiadana azy ireo, manome fomba isan-karazany manokana sy manokana izy ireo. Ity kiraro retro-futuristic ity dia azo atao amin'ny akanjo samihafa, manomboka amin'ny akanjo miloko kofehy amin'ny endriky ny Fanjakana na lava lava ary mifarana amin'ny tsatoka sy fika fohy. Ny hany fitsipika dia tsy ny manao kapa maro miaraka amin'ny kiraro, satria izy ireo dia mieboebo sy tsy misy tsirony toy izany.
Kapa mihidy. Amin'ny ankapobeny, sandoka toy izany no atletika na orthopedic. Tsara ry zareo, satria vita haingana be. Afaka miseho miaraka amin'ny akanjon'ny fanatanjahan-tena, akanjo, pataloha na shorts izy ireo.
Eco Coats ihany aho
Vehivavy miloko marevaka
T-shirt misy soratra mahaliana sy sary
Skirt-ny masoandro - ny fomba samihafa indrindra amin'ny fotoana rehetra
Ireo olo-malaza 25 ireo dia tsy saro-kenatra ny mizara sary tsy hita ao anaty tambajotra sosialy!
Brad Pitt dia hanangana toeram-pitsangatsanganana any Kroasia ao amin'ny drafiny manokana
Ny fitomboan'ny Lionel Messi
Blaogera misy diabeta mellitus
Moby namoaka lahatsoratra maneso ny tolo-kevitry ny governemanta Trump
Kerr, Ambrosio, Baldwin ary ny zanak'i Cindy Crawford dia nanjelatra tamin'ny fampisehoana an'i Moschino
Charlotte miaraka apples amin'ny yogourt
Sakafo volafotsy amin'ny nify voalohany
Ririnina eo amin'ny tarehiny
Kitapo miaraka amin'ny masomboly masira
Fanamboarana rindrina vita amin'ny plastika plastika
Fitiavana toy ny fomba fiainana
Ahoana ny fitsaboana ny kibon-doha?
Atsaharo ny soritr'aretina
Chicago Style amin'ny akanjo
"Hering eo ambanin'ny akanjo lava" salady - recipe